Igwe mmanụ dizel
Igwe ọkụ gas
Uto Dizel Generator Ahuma ga agha ato ato site na Teknụzụ Teknụzụ
Dizel generator bu akụrụngwa eji ewepụta ọkụ eletrik site na ike ọrụ igwe, nke enwetara site na combustion nke diesel ma ọ bụ biodiesel. Dizel generator nwere engine nke combustion na-arụ ọrụ, ọkụ eletrik, njikọta njikọta, njikwa ọkụ na ọsọ ọsọ. Nke ...
Ọrụ nke ndị na-emepụta diesel arụnyere ihe mmetụta okpomọkụ
N'ime usoro iji ndị na-emepụta diesel, ndị ahịa kwesịrị ị paya ntị na ọnọdụ okpomọkụ nke coolant na mmanụ ọkụ, ọtụtụ ndị ahịa nwere ajụjụ a, otu esi enyocha ọnọdụ okpomọkụ ahụ? You kwesịrị iburu temometa gị na ya? Azịza ya dị nnọọ mfe, iji wụnye ihe mmetụta okpomọkụ maka ...
Ihe niile ị chọrọ ịma tupu ịzụrụ otu set Diesel Generator
site ha na 21-04-19
Gịnị bụ Dizel Generator? A na-eji ihe na-emepụta mmanụ diesel iji nweta ike eletrik site na iji injin diesel yana igwe eletrik. Enwere ike iji generator dị ka ihe mberede ike mberede ma ọ bụrụ na ọ ga - ebelata ike ma ọ bụ ebe ọ na - enweghị njikọ na ntanetị ike. Ofdị ...
Dizel Generator Ajụjụ
Kedu ihe dị iche na kW na kVa? Isi ihe dị iche n'etiti kW (kilowatt) na kVA (kilovolt-ampere) bụ ike ike. kW bụ akụrụngwa nke ezigbo ike yana kVA bụ ike pụtara ìhè (ma ọ bụ ezigbo ike gbakwunyere ike ọrụ). Ihe ike, belụsọ na akọwara ya ma mara ya, bụ ...
Nyocha nke ihe kpatara ọnụọgụ mmanụ mmanụ mmanụ Diesel.
Ebee ka mmanụ oriri nke mmanụ dizel na-aga? Akụkụ ya na-aga n'ime ụlọ ọkụ n'ihi mmanụ mmanụ na-emebi ma kpọọ ya ọkụ ma ọ bụ mepụta carbon, akụkụ nke ọzọ na-agbapụkwa site na ebe akara ahụ adịghị sie ike. Mmanụ dies generator na-abanyekarị n'ime ụlọ combustion site na ...
Asatọ nzọụkwụ dị mkpa maka kwesịrị ekwesị dizel generator mmezi
Nchịkọta diesel generator kwesịrị ekwesị bụ ihe dị mkpa iji hụ na akụrụngwa gị na-agba ọsọ ruo ọtụtụ afọ na-abịa ma isi ihe 8 ndị a dị mkpa Ndi mmadu ...
Mmezi Ihe nke dizel Generator
Mgbe grid eletriki adịghị adapụta ọ pụtaghị na ị nwekwara ike. Nke a adịghị adaba ma ọ nwere ike ime mgbe ọrụ dị oke mkpa na-aga n'ihu. Mgbe ike na-apụ na oge arụpụta ihe anaghị enwe ike ichere, ị ga-echigharị gaa na generator gị iji nye akụrụngwa na akụrụngwa ike ...
Ọnọdụ okpomọkụ nke injin diesel dị oke. Enwere ike iwepu thermostat ahụ?
Kedu ka thermostat si arụ ọrụ Ugbu a, mmanụ dizel na-ejikarị thermostat wax na arụ ọrụ arụmọrụ. Mgbe mmiri jụrụ mmiri dị ala karịa ogo a tụrụ atụ, a na-emechi valvụ thermostat na mmiri jụrụ ahụ ga-ekesa naanị na mmanụ dizel na obere wa ...
Obi ụtọ na Womanbọchị Nwanyị Mba .wa
Obi ụtọ ụbọchị ụmụ nwanyị mba ụwa! Ekele dịrị ndị ọrụ nwanyị anyị niile. Ike Hongfu chọrọ ka unu niile bụrụ ụmụ nwanyị bara ọgaranya, nwee mmụọ bara ụba: enweghị echiche, nchekwube, ihu ọchị, ịhụnanya bara ụba: na-enwekarị obi ụtọ, nwee obi ike ọgaranya: na nrọ ndụ, na-ewe naanị ụgwọ nke. Nwee ọ women'sụ ụbọchị ụmụ nwanyị!
Hongfu Power Guide gị otu ị ga - esi mee ka genset gị nọrọ na arụmọrụ dị egwu
Stationslọ ọrụ na-enye ike nke Hongfu Power rụpụtara achọpụtala ngwa ha taa, ma na ndụ kwa ụbọchị na mmepụta ụlọ ọrụ. Na ịzụta dizel AJ usoro ihe eji emepụta mmanụ dizel ka akwadoro ka isi ihe na ebe nchekwa. A na-eji ngwa dị otú ahụ nye voltage ma ọ bụ mmadụ ...
Esi belata oriri ikuku okpomọkụ nke dizel generator set
Otu esi belata nri ikuku nke mmanụ diesel setịpụrụ Dizel generator na-arụ ọrụ, ọnụọgụ eriri igwe dị oke elu, ọ bụrụ na nkeji ahụ dị elu dị elu ga-eduga na ikpo ọkụ adịghị mma, metụta ọrụ nke otu , na ọbụna belata servi ...
Site na gen setịpụrụ ihe e kere eke na Lincolnshire, UK maka itinye ihe na Caribbean
Mgbe Lincolnshire, UK onye na-emepụta genset zuru ụwa ọnụ Welland Power chọrọ 4 x Critical Standby alternators maka onye na-egwupụta ihe na Caribbean ha ekwesịghị ile anya. Ewubere na aha ọma maka ịdị mma na ntụkwasị obi tinyere mgbakwunye mmekọrịta na-arụ ọrụ karịrị afọ 25. Ọpụrụiche na ...
Obere Generator, Igwe Ọdụdọ ndọta, Generator 125kva, 200kw Generator, Ahịa Generator, 240kw Generator,
Enwere Ngwaahịa Products Chọrọ?
Dị ka mkpa gị si dị, hazie gị, ma nye gị ngwaahịa ndị ọzọ bara uru